Zahatany – fanilo
Fijoroana��ny Restaurant Le complexe : Nampisongadina hatrany ny vita malagasy
Nankalaza ny faha herintaona ny Toeram-pisakafoana A� Le complexe A� etsy Antanimena. Nampisongadina hatrany ny nahandro tena malagasy izy ity ary mbola vonona ny hanome ny tsara ho ana��ny Malagasy na ny teratany vahiny, tonga eto Madagasikaraa��
Nanana ny nampiavaka azy hatrany ny toeram-pisakafoana A�A�Restaurant le complexeA�A� etsy amina��ny Villa Pradon Antanimena, nandritra izay herintaona nijoroany izay. A�Fantatra fa nankalaza ny faha herintaona nijoroany ity toeram-pisakafoana ity, ny 15 desambra 2017, lasa teo. HetsikaA� marobe no notontosaina, tamina��ity takariva niavaka ity, satria nisy ny fiaraha-nanapaka mofomamy tamina��ireo mpanotrona. A�Niavaka ny lanonana, fa […]